Kuboshwe abathathu | News24
UMPHATHI wesiteshi saseNsuze, uKaputeni Jabulani Ndawonde, elekelelwa i-Provincial Crime Intelligence, Tracing Team, KwaDukuza Task Team kanye ne Umhlali K9 Unit ulandele umkhondo wabekade besolelwa ukuhlupha umphakathi waseNsuze.
Lokhu kuvele ngombiko othunyelwe abezindaba ngokhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uKaputeni Nqobile Gwala. Uthe umsolwa wokuqala, oneminyaka engu-24, uboshwe endaweni yakwaNgcongangconga ngoLwesithathu oledlule, ngomhla ka-19 kuMbasa (April), lapho abekade ecashe khona. Uthe ngoLwesine oledlule, lelithimba liqhubekele eCato Manor lifuna omunye umsolwa.
Uthe: “Umsolwa oneminyaka engu-34 okunguyena obengungqondongqondo ekubulaweni kwabantu abamsulwa endaweni yaseNsuze, uboshwe eCato Manor. Utholakale nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu eziyisihlanu,” kusho uKaputeni Gwala.
Uqhube wathi lelithimba liqhubeke nophenyo lwalo oluphethe ngokuthi kuboshwe umsolwa wesithathu ngoLwesine ebusuku kwaNgcongangconga. Uthe lo msolwa oneminyaka engu-19 uboshwe ekhaya lakhe.
Uthe: “Isigameko sokuqala senzeka ngomhla ka-9 kuMbasa lapho khona umshayeli weveni owayephuma emcimbini endaweni yakwaMgeyane, kwaNgcongangconga, wamisa imoto ngoba efuna ukuyalelwa ngendlela eya eBhamshela. Abasolwa badubula umshayeli kanye nomgibeli oyedwa. Ngomhla ka-16 kuMbasa, kusolakala ukuthi kwadutshulwa abantu abathathu bashona endaweni yakwaNgcongangconga. Kuvulwe amacala amathathu okubulala emaphoyiseni aseNsuze. Imbangela yokubulala kuzona zombili lezizigameko ayikaziwa. Kusolakala ukuthi abasolelwa lamacala yibona abekade behlukumeza umphakathi waseNsuze,” kusho uKaputeni Gwala.
Uqhube wathi kulindeleke ukuthi abasolwa bazovela eNkantolo yeMantshi yaKwaMaphumulo ngoMsombuluko, ngomhla ka24 kuMbasa.
Ibamba likaKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Major General Bheki Langa uthe: “Kuyasithokozisa ukuthi umphakathi waseNsuze usuzophila ngokuthula ungabi nakho ukwesaba,” kusho yena.